War deg deg ah: Guddiga Doorashada oo gabi ahaan joojiyay Doodii loo qaban lahaa Musharixiinta Xilka Madaxweynaha War deg deg ah: Guddiga Doorashada oo gabi ahaan joojiyay Doodii loo qaban lahaa Musharixiinta Xilka Madaxweynaha – Somnews
You are at:Home»WARARKA»War deg deg ah: Guddiga Doorashada oo gabi ahaan joojiyay Doodii loo qaban lahaa Musharixiinta Xilka Madaxweynaha
War deg deg ah: Guddiga Doorashada oo gabi ahaan joojiyay Doodii loo qaban lahaa Musharixiinta Xilka Madaxweynaha
By somnews on	 January 31, 2017 WARARKA
Iyadoo maanta lagu Madalsanaay in Xarunta Golaha shacabka Lagu qabto dood furan oo u dhaxeysa Musharixiinta xilka Madaxweynaha ayaa waxaa saakay Xarunta Golaha shacabka ka baxay Musharixiin dhowr ah oo dooda ka qeyb galaayay.
Guddiga Qaban qaabada doorashada Madaxweynaha ayaa Goordhw ka hadlay Sababta keentay in Musharixiinta ay uga baxeen xarunta Golaha shacabka.
Guddiga waxa uu sheegay in Gabi ahaanba la joojiyay Dood-wadaagii loo qaban lahaa Musharixiinta xilka Madaxweynaha u taagan.
Guddoomiyaha Guddiga qaban qaabada Doorashada Madaxweynaha C/rixmaan Ducaale Beyle oo Warbaahinta kula hadlay xarunta Golaha shacabka ayaa sheegay in la hakiyay doodii Musharixiinta isagoona taasi ku Sababeeyay in Cilad dhanka Internetka ah ay Maanta ka jirtay Dalka Soomaliya.
Guddoomiyaha waxa uu sheegay in Cilada Intarnetka ka jirtay ay keentay in TV-yada aysan si toos ah u tabin karin Barnaamijka Dood-wadaaga Musharixiinta.
“Waxaan u aragnay in hadii aan dib u dhigno Dooda oo la qabto mar kale inay taasi qaldi karto Jadwalka loo go’aamiyay habraaca doorashada, sidaa darteed waxaan joojinay doodii Musharaxiinta loo qaban lahaa.” ayuu yiri Guddoomiye Bayle.
Guddoomiyaha wuxuu kaloo shaaciyay in maalinta Khamiista oo taariikhda ay ku beegantahay 2-da Bisha Feberaayo in ay si Rasmi ah u bilaaban doonto khudbadaha ay jeedinaya Musharixiinta waxaana ay socon doonta mudo 3 Maalmood ah iyadoona ku eg 5-ta Bisha Feberaayo kadib 8 Bisha waxaa dhici doonta doorashada Madaxweynaha Jamhuuriyada Soomaliya.